Waxaa laga yaabaa inaad ku toogteen videos cayriin ee kala duwan ay iPhone oo doonaya in ay tirtiraan meelaha aan loo baahneyn iyo Xarunta shayga ugu muhiimsan. Ama waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ka saarto naqshadeynta xadka dhibsado oo ku dhibin Raaxo video ah soo qaato oo meel aan loo baahnayn. Video abuurka oo waa habka ay u tagaan. A caato ah oo ajiibaa video qalab, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) , wuxuu keeni karaa hawshan gaadho qof walba. Waxa ay taageertaa dalagga 16: 9, 4: 3 iyo kartoo filimada muuqa in iPhone videos. Bal aynu eegno sida ay u noola iPhone video la Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) hadda. Haddii aad raadineyso weeyna barnaamijyadooda iPhone video tafatirka, hubi liiska ugu sareeya .
1 dejinta aad iPhone videos
Download iyo rakibi Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor). Markaas riix "Import" button inay ku shuban iPhone Video file u video abuurka. Waxa kale oo aad si toos ah jiidi-n-daadiyaa kartaa video files barnaamijka.
2 Bilow lana siii aad iPhone videos
Hadda jiidi aad file video ka User ee Album in waqtiga. Markaas laba jibaar guji file bartilmaameedka iyo waxaad ka heli doontaa "Dalag" badhanka dhexe ee shaashadda soo socda si button soo laabtay. Waxaa Riix oo aad xagga daaqaddii dalagga tegayaa.
Sida aad arki karto, waxaa tahay laba Falanqeynta daaqadaha. Qofka ugu horeeya ee aad ku siinaysaa aragtida video asalka, halka mid ka mid labaad ku tusaysaa saamaynta-waqtiga dhabta ah ee aad saamayn abuurka ah.
Markaas waxaad dooran kartaa dalagga gacanta ama si toos ah. Guji 16: 9 ama 4: 3, iPhone videos loo jaray doonaa radio dhinaca. Haddii aad doorato gacanta, isticmaal uun badhanka mouse bidix jiidi deegaanka in aad rabto in aad sii hayn on image video ah. Markaas riix "Play" icon inay is barbar dhigaan video asalka iyo video ah ay yaryihiin, laga beddelo meel dalagga, width dalagga oo sarajooggeeduna wuxuu dalagga.
3 dhoofinta videos iPhone ay yaryihiin
Haddii aad tahay qof ku qanacsanayn natiijada, riix "Abuur" badhanka si loo badbaadiyo iPhone video ay yaryihiin. Tag ah "Qaabka" tab, ka dibna dhoofin aad videos qaabab video kala duwan si aad u computer. Haddii aad rabto in aad ka ciyaari video ah ay yaryihiin oo ku saabsan aaladaha kale sida iPod, iPad, Zune, ECT, tag "Device" tab iyo dooran ka mid ah liiska. Ka sokow in, sidoo kale si toos ah in aad la wadaagi karto video ah on YouTube, Facebook iyo Twitter ama gubi in DVD disc u ciyaaro on TV ciyaaryahanka DVD ah.
Dhab ahaantii, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa aalad tafatir ah feature-hodan video in aad ku darto oo xiiso dheeraad ah si aad u iPhone videos. Tusaale ahaan, waxaad ku biiri kartaa dhowr videos wada, kala videos, ku dar watermark in video, music soo jeeda isbedel iyo in ka badan. Download oo ay kobciso aad video adduunka hadda!
> Resource > iPhone > iPhone Video Cropper: Sida loo Dallaga iPhone Video